China Powder Yakavharwa Matatu-Akanongedza Nyeredzi Picket Steel Y Fence Post fekitari nevagadziri |Zhanzhi
Steel star picket fence post inozivikanwawo sesimbi Y post, steel star post, metal picket, steel post, simbi picket, simbi fenzi post, etc. Muchikamu chemuchinjiko, simbi inoumba nyenyedzi ine mativi matatu ine dhayamita inokwana kuita. 10cm.Mugumo mumwe wakanongedzwa kuitira kuti simbi inoroverwa pasi nyore nyore, uye imwe magumo yakati sandara kuti igamuchire sando.Maburi akacherwa kare anoboorwa pamwe nehurefu hwemapango kuti abatanidze waya kumasiteki ekuchengetedza kufenzi yenguva pfupi, zvivhariso mambure, nezvimwe.
1) Surface kurapwa: poda yakanamirwa kana inopisa yakanyikwa marata
2) Standard: American mwero, mwero weAustralia, chiyero cheEuropean
3) Kureba: 0.45m-3.0m, kana sezvinodiwa nemutengi
4) Ruvara: Dema, danda grey, jecha rerwizi, w/t coating, jasper, monument, domain, paperbark, manor red, nezvimwe.
6) Kushandisa: Gadheni Fence, Highway Fence, Sport Fence, Farm Fence, nezvimwe.
Yedu poda yakashongedzerwa nyeredzi nhatu dzakanongedza simbi Y fenzi positi yakaoma, inogara kwenguva refu, yakaderera kugadzirisa uye inogona kuchinjirwa kuti ienderane neyakasiyana mashandisiro efenzi kunhandare dzendege, njanji, nhandare dzekutamba, nzvimbo dzekuvakisa, maperimita nemadziva ekutuhwina, nezvimwe.
FAQ Nezve Y Fence Post
1. Iyo shoma yakazara dhayamita yepositi chubhu i76mm?
76mm dhayamita shoma nemadziro ukobvu hwe2.9mm uye yekona post min dia.160mm, ukobvu hwemadziro 3.6mm.
2. Magedhi mangani (kuvhurwa kweshizha rimwe chete kune vanofamba netsoka uye mashizha maviri ekuti motokari isvike) inodiwa pamakiromita maviri eChain link fence?
3. Detailed zvinodiwa kuti tension bhaa pamusoro?
Diameter 76mm madziro ukobvu hwe1.8mm uye kureba kwe2800mm.
4. Mapango mangani epakona anodiwa pamakiromita maviri Chain link fence?
10 mbiru dzepakona.
5. Kureba kweposvo kunodiwa uye kureba kwefenzi?
Fence post urefu i2650mm, kureba kwefence i2,000mm uye Y-yepamusoro ruoko ine hurefu hwe500mm.